Naorina To mirehareha Pt. 1 — Trip LEE - OFISIALY SITE
Naorina To mirehareha Pt. 1
Tsy misy olona tia ny anarany droppers. Fantatrareo izay aho miresaka momba ny. Ireo olona izay te ho fantatrareo fa fantany ny olona fa mety te-hahafantatra. Rehefa mieritreritra aho "namedropper,"Misy lehilahy iray izay tonga avy hatrany ao an-tsaina. Aho nifanena taminy fotsiny ny fotoana vitsivitsy, fa isaky ny efa niresaka, antsasaky ny resaka dia nakarina amin'ny miharihary anarana nilatsaka.
Fantany tsara maro ny "fotoana lehibe" ny olona, ary manana fahafahana hangala mitombina ireo anarana ho any resaka. Ity ohatra. miteny aho, "Hey olona, amin'ny firy izao?"Ny valin-: "Oh, izany tamin'ilay antoandrobe iny. Mampahatsiahy ahy andro izany aho nilalao putt putt amin'i Michael Jackson amin'ny mitataovovonana any Paris. "Teny?
amim-pahatsorana, Izany dia midika hoe tsy anarana fotsiny droppers izay irk antsika aza. Izany ny olona izay mirehareha amin'ny ankapobeny. Reraka isika maniry ny mandre olona mirehareha momba ny sekoly ambaratonga faharoa baolina kitra andro (tonga ny fotoana hifindra amin'ny, tompoko). Tsy sasatra ny tombontsoa namana izay mahita fomba ny bitsika momba toerana ireo vahiny rehetra mitsidika. Ary tsy manana faharetana be ho an'ny olona izay tsipiriany ho antsika rehetra izy ireo hividy zavatra lafo vidy (raha tsy ry zareo rappers, mazava ho azy). Na izany covertly hirehareha mikasika ny hoe iza no mahalala, na unashamedly manondro avy ny zava-bita rehetra, hirehareha marina dia tsy mangatsiaka.
Raha tsorina, hirehareha dia ny "miresaka boastfully." Ary isika rehetra efa meloka izany amin'ny fotoana iray. Izany foana mampahasaro maso horonan-taratasy, raha ny hafa hanao izany - koa nahoana isika no mbola handray anjara amin'ny izany ny tenantsika?
Hirehareha mitranga rehefa manana zavatra (na hanao zavatra) ka Mahagaga fa ny olona rehetra araka ny eritreritrao mila mahafantatra momba izany. Ary tsy izany ihany no ilainy ho fantatra momba izany, dia mila mahafantatra ny fomba mahatahotra ianao noho ny manana (na manao) izany. Raha ianao marin-toetra amin'ny tenantsika, isika anarana mitete sy ny manetry tena mirehareha ny namantsika isika, satria mahatonga antsika mihevitra fa mijery tsara. Ary izany indrindra no mahatonga izany ratsy.
Ny olana dia tsy izay zavatra ianao dia tsy hirehareha amin'ny lehibe. Mety ho. Ny olana dia ny tanjona farany dia tsy dia lehibe. Na inona na inona ataonao noho ny tena manokana voninahitra dia ota.
Soratra Masina tarehy miteny mafy momba izany karazana lahateny nirehareha. Ohatra iray ao amin'ny 1 Corinthians 4:7, izay Nanontany i Paoly hoe, "Inona no anananao, izay tsy noraisinao? Ary raha nandray ihany, nahoana no mirehareha toy ny tsy nataonareo ianareo?"Izy no ankapobeny nanao hoe:, "Ny zavatra rehetra ianao nomena anao. Koa nahoana no mirehareha, rehefa nanao dia ianareo rehetra dia hanaiky ny fanomezana?"
Mpirehareha teny tsirairay isika hambarambaranao dia nitifitra mikendry mivantana amin'ny Mpanao antsika. Ny zavatra tsara rehetra dia avy Aminy, izay midika hoe tsy misy amintsika afaka handray ny voninahitra ho azy. Rehetra ny voninahitra ao amin'ny Izao Rehetra Izao an'Andriamanitra, fa miezaka foana isika mba hitandrina ny sasany ho an'ny tenantsika. Ao amin'ny tontolo akademika, maka voninahitra ho an'ny olona iray ny asa hafa dia antsoina hoe fisandohana. Ao amin'ny tontolo tena izy, Izany dia midika hoe antsoina hoe mpirehareha.
Tsara izay Nitoetra izany avy eo, marina? tsy, mandrakizay mirehareha!
Tsy mino aho fa tena izany tsotra. Nefa tsy manao Mihevitra aho fa tokony mirehareha ianao indraindray, Mihevitra aho fa ny zavatra namoronana anao hanao. Avelao aho hanazava.
Tsarovy, ny fototry ny mpirehareha dia mieritreritra zavatra tsy dia mahagaga, ka izay rehetra mila mahafantatra momba izany. Ireo amintsika izay efa navotana Jesosy no manana zavatra mba hirehareha momba - Andriamanitra Izy Tenany. Raha mahalala an'Andriamanitra, Tokony ho toy izany isika hitsofana hiala avy Aminy fa mahatsiaro ho voatery hitory ny hatsaran amin'ny hafa (1 Pet. 2:9). Izy lehibe loatra ny hitandrina ny tenantsika. Jeremiah 9:23-24 mamintina izany tsara.
Izao no lazain'i Jehovah lazain'i:
"Aoka ny hendry tsy hirehareha amin'ny fahendreny
na ny mahery hirehareha amin'ny heriny
na ny manan-karena ny olona hirehareha ny hareny,
fa aoka izay mirehareha hirehareha momba izany:
fa mahafantatra sy mahalala ahy,
fa Izaho no Tompo, Izay maneho hatsaram-panahy,
ny rariny sy ny fahamarinana eto an-tany,
fa ireo no sitrako,"
hoy ny Tompo.
Raha mahalala an'Andriamanitra, Tiako ho mirehareha. Fa raha manao, aza avela ho ao ny fahendrena, na ny hery, na ny harena. Tsy, mirehareha momba ny. Mirehareha amin'ny zava-misy fa fantatrao ny iray amin'ny fahendrena tonga lafatra, rehetra-mahery hery, ary tsy misy fiafaràny harena ny fahasoavana. Raha tokony mampiasa ny teny mba hahazoana ny lazany manokana, hampiasa azy ireo mba hampisehoana eny ny.
Ny Izao Rehetra Izao dia toy ny fampisehoana raharaha ho voninahitr'Andriamanitra. Nohariana ny tany, mba hanehoany ny heriny. Ny hazo no niforona mba mampideradera ny hatsaran-tarehiny. Biby no norafetiko mba milaza ny ny fahalehibiazanao. Ary ianao? Ianao dia naorina mba hirehareha Azy. Koa raha manao Mitete anarana, aoka ho ny.
Aaron herinandro • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:09 PM • navalin'i
Izany no tena lehibe diany, foana ny asa fitaovana!
Erin • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:11 PM • navalin'i
izany no mahafinaritra voasoratra. mahatonga be dikany. Tiako ny lavany ihany koa. be an-dalana. Tsy afaka miandry ny mamaky bebe kokoa, Trip.
Justin Humphrey • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:32 PM • navalin'i
Thanks Trip. Izany no tena tsara ny teboka. Ny zava-bita manokana raha oharina amin'ny tsy misy fiafaràny ny fahasoavana dia tsy misy ilana azy. Andao nanomboka hirehareha momba ny Tompo sy Mpamonjy antsika!
keli Sthran • Aogositra 19, 2013 amin'ny 6:35 PM • navalin'i
Izany no tsara Trip! Ny toerana vaovao toa mahagaga!
Melody • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:04 PM • navalin'i
Wow. mahery. Tweet, anjara, mailaka!
Jay • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:14 PM • navalin'i
Manana zavatra goavana mba hizara aminareo!! Noho izany, I manaraka ireto roa 18 taona ny Kristianina ao amin'ny YouTube, Instagram&Twitter sy iray volana sy roa andro lasa izay, Nilaza izy ireo fa izy ireo nilaza Andriamanitra mba handao NC ka mankanesa any Los Angeles. Tonga izy ireo omaly!!!! ankamaroany?!! Dia navelany NC amin'ny enina ambin'ny folo dolara, ny indray fonosana sy ny finoany, dia nandeha!!! Teny an-dalana, izy ireo nomena bisikileta, avy eo sakafo, fialofana, mitaingina &-bola mba hanampiana teny an-dalana. Ary na dia tsy mangataka izany!!!!! Fotsiny ny olona ho miakatra ho eto amin'ny azy ireo sy manome. Tahaka izy ireo dia nahita ny Fanahin 'Andriamanitra azy rehetra!! Dia voarakitra vids teny an-dalana tao amin'ny YouTube ary nandefa sary tao amin'ny Instagram sy ireo antsika ho amin'ny daty ao amin'ny Twitter ihany koa. Ny YouTube dia tsy vaovao farany tao anatin'ny herinandro fa mbola manana fijoroana ho vavolombelona mahatalanjona nozaraina tao amin'ny any avy mandritra ilay dia ary izy ireo vaovao farany ny Twitter sy Instagram saika isan'andro. Fotsiny te hampiely izany aminao mba afaka niely ity vaovao lehibe-pinoana. Angamba afaka na dia mahazo mifandray aminy sy hizahanao toetra ny FANAHY. Ireo lehilahy ho an'Andriamanitra dia legit. MAHAVARIANA fijoroana ho vavolombelona. Mamela niely ny vaovao tsara!
ny YouTube: YouTube.com/Livin4Christ4Lyfe
ny Instagram: Livin4Christ4Lyfe
ny Twitter: Liv4Christ4Lyfe
Hitahiana ny rahalahy!! Izany nitombo ny finoako ny fanantenana koa fa mampitombo anao!!
Ben Sudderth III • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:17 PM • navalin'i
Tia namaky ny bilaogy. Tena mahaliana sy mora azo. Fitandremana manao ny manao!
Ankafizo ny Fitahiana
David Gaines • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:18 PM • navalin'i
Eny maha zanak'Andriamanitra isika, miorina mba hirehareha momba ny heriny lehibe, fitiavana, famindram-po, ary indrindra fa ny fahasoavany. Hoy ny Tompo, Raha misy olona mirehareha aoka Azy mirehareha ao amin'ny Tompo. Ny teny hoe swag dia midika koa mba hirehareha na mirehareha-tsaina feno avonavona izay zavatra tokony hatao rehefa manao izany rehetra izany momba anao. Raha mikasika ny swag, izao tontolo izao mametraka ny fitsipika, lazainy ny olona whats ny fironana na izay mangatsiatsiaka na tsy. Maha-Kristianina dia tsy ny zavatra malaza indrindra ho amin'ny fiaraha-monina izany andro, fa izany tokoa no tena zava-dehibe. Amin'ny maha-Kristianina ny tonga lafatra ho antsika ny manana swag, ny tsara indrindra swag, ary thats Swagg araka an'Andriamanitra, izay midika fotsiny hirehareha ao amin'ny Tompo Andriamanitra. Amin'izao mandeha, ny resaka, ary alalan'ny hira no ankalazainay sy mirehareha ny Tompo Jesosy Kristy, satria noho ny hazo fijaliana dia efa tonga vokatra ny fahasoavany ary dia ny fiainantsika ny asa nanirahana ny handresy bebe kokoa ny fanahy amin'ny alalan'ny fitoriana ny Filazantsara ny fahasoavana.
Malemaadutse • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:24 PM • navalin'i
Misaotra ny teny mafy I'm rahalahy-meloka ny mpirehareha. Dia manao tsara kokoa rahampitso.
Sarah • Aogositra 19, 2013 amin'ny 7:38 PM • navalin'i
Miombon-kevitra aminao tanteraka! Tsy mbola nieritreritra ny ho “naorina mba mirehareha” fa tena nandresy lahatra ahy. I Tena tia mamaky ny soratra. Mampino nampahatezitra nihevitra fa mifandanja amin'ny fampaherezana. Perfect fifangaroan'ny roa!! Misaotra-tsoratra.
Jay • Aogositra 19, 2013 amin'ny 8:08 PM • navalin'i
Amen. Izany dia tamin'ny teboka Tripp. Misaotra anao noho ny maha-fitahiana. #SpiritLed #BragOnMyLord
KARLONBURKETT • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:31 PM • navalin'i
No Hataoko mirehareha eo an-tanako Jehovah?
KARLONBURKETT • Aogositra 19, 2013 amin'ny 9:32 PM • navalin'i
“Reraka isika maniry ny mandre olona mirehareha momba ny sekoly ambaratonga faharoa baolina kitra andro (tonga ny fotoana hifindra amin'ny, tompoko).” #Preeeach!
KGRANT • Aogositra 19, 2013 amin'ny 10:00 PM • navalin'i
I tafintohina eo amin'ity lahatsoratra ity sy zazalahy, no Mampahery. Ka be dia be ny hisaintsaina avy ireo teny ireo. Tena na ny fampaherezana sy ny tokony handini-tena sy ny antony manosika. Voninahitra anie Andriamanitra noho ny fanomezany ny fanomezana anao hanoratra izany!!!
Terrence • Aogositra 19, 2013 amin'ny 11:01 PM • navalin'i
Great Job Trip! Tiavo ny sombin-peo. Tsy hita fa talohan'ny! Mampahatsiahy ahy ny fotoana nihantona teo amin'ny… Sangisangy izany! Great Fampaherezana.
Langston • Aogositra 20, 2013 amin'ny 1:10 aho • navalin'i
Awesome lahatsoratra, Trip! tiako ity. Tena nampahery izao. Misaotra anao mankatò sy namela anao Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny!
India • Aogositra 20, 2013 amin'ny 1:35 aho • navalin'i
Tsy mampino anjara Mr. Trip!!! Dia nampientam-po mahery vaika sy!
James • Aogositra 20, 2013 amin'ny 4:34 aho • navalin'i
Lehibe tokoa ny mahita Trip mbola milaza ny marina na dia misy fitaovana hafa noho ny mozika. Izany dia lehibe hamaky, Tsy andriko izay mandre bebe kokoa izany. hotahian'andriamanitra anie ianao, Trip.
Reggie • Aogositra 20, 2013 amin'ny 8:53 aho • navalin'i
Nahazo ny zavatra sasany mba hanova.
Aubrey • Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:35 aho • navalin'i
Tiavo ny tsotra ny toriteny – tsara tarehy
Mallory • Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:38 aho • navalin'i
Afaka ianao, azafady hitantara ny zava-drehetra manomboka izao?
broChris • Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:40 aho • navalin'i
Lehibe hevitra mampisaintsaina mamaky Mr. Trip. Maro no afaka izany am-po, ary ankehitriny mampihatra. Tohizo ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao, izay ankehitriny dia ahitana ny maha-tsara tarehy lehibe mpanoratra, ary manohy mizara ny hafatra amin'ireo fanomezam-pahasoavana… dia hahatratra mihoatra noho ianao ve fantatrao. TAHIN'ANDRIAMANITRA, #JesusIsKing
Jose • Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:44 aho • navalin'i
Billy • Aogositra 20, 2013 amin'ny 10:59 aho • navalin'i
Great lahatsoratra. Izany namboatra izay fahalalana lalina fa tsy nieritreritra teo anatrehan'i. Aho miandrandra ny Fizarana faharoa! Eny ary nanao.
PhillipHolyApostleMurphy • Aogositra 20, 2013 amin'ny 12:24 PM • navalin'i
Tena tsara hafatra… Sambatra hihaino ny Tompo miteny amin'ny alalan'ny… Ny lehibe Andriamanitra!!!! Ny Andriamanitra tsara!!!! Izy no Tena mahatahotra!!!
okaro Rex • Aogositra 20, 2013 amin'ny 12:26 PM • navalin'i
Ny ampahany lehibe. Aoka ny tena mpirehareha hanomboka.
Dri • Aogositra 20, 2013 amin'ny 2:53 PM • navalin'i
I mihady izany.
Mareesa • Aogositra 20, 2013 amin'ny 2:58 PM • navalin'i
sakafo lehibe for hevitra :)
IsaacD • Aogositra 20, 2013 amin'ny 3:15 PM • navalin'i
Izany no lehibe lahatsoratra, tsara voasoratra, ary tena tia ny raki-peo singa no nanampy azy. Misaotra ianao tompoko noho ny fizarana izany.
Amber • Aogositra 20, 2013 amin'ny 7:01 PM • navalin'i
Matetika aho no manao izany; mirehareha. Izany bebe kokoa taratry ny avonavona foana isika tampon'ny nihanalefaka ny fo. Noho ny antony manome voninahitra an'Andriamanitra manoloana ny tsy mpino, fa mety ho sarotra ihany noho ny avonavona.
Vao haingana aho no isa avo dia avo indray aho rehefa nandray ny ASVAB. Tena faly aho satria fantatro Andriamanitra dia nanampy ahy hanao izany. Ny famindram-po dia inona no nanome ahy ny baolina, ary ny fahalalana izay nataony tao aho Nanampy ahy hahatakatra matematika equations tena tsy afaka takarina aho eo anatrehan'i. Kanefa rehefa tonga niverina ny tarika rehetra dia nilaza izay nahazo tamin'ny fientanentanana fa taty aoriana dia nahatsapa ho voaheloka satria fantatro ihany aho nilaza tamin'ireo mpino dia fantatro fa Andriamanitra rehetra. Ny tsy mpino dia tsy nilaza ny fijoroako ho vavolombelona.
Manao asa fanompoana am-ponja aho ny alahady sy ny hafahafa izany, satria aho rehefa teo anoloan'izy ireo afaka miraharaha loatra aho raha mihevitra izy ireo mafana fo aho avy eo, rehefa any am-piasana aho mandrakizay aho zara raha mitondra ny anarana. Ny olon-drehetra mahafantatra Kristianina aho fa tsy misy amin'izy ireo manana Vakio ny fomba rehetra Izy izany no tao an-tsaiko 24/7.
Miasa aho izany. Misaotra ny fizarana.
hivavaka • Aogositra 20, 2013 amin'ny 9:12 PM • navalin'i
U nanova ny fiainako fotsiny Trip. Masìna ianareo hahazo hery volana ND vison…. Misaotra
Alejandro • Aogositra 20, 2013 amin'ny 9:36 PM • navalin'i
Trip , Andriamanitra anie hitahy anao ny olona !
Zavatra tsy nilaina ho toy ny fampahatsiahivana sy izay misaotra anao, mamela an'Andriamanitra hampiasa anao hanao fanompoam-pivavahana. Tamim-pihantsiana isika manana ny zavatra tsara indrindra mba hirehareha momba ny.
Tiffanie • Aogositra 20, 2013 amin'ny 9:42 PM • navalin'i
Izany no awesome! Thanks Trip. Tiako ny fomba mbola nandatsaka ny fahalalana antsika ao anatin'ny fe-potoana fohy :)
BrantPhelps • Aogositra 21, 2013 amin'ny 10:17 PM • navalin'i
Izany no zavatra tsara, Trip… Ny zavatra rehetra dia manana nomena antsika amin'ny alalan'ny niavaka sy mahatahotra Andriamanitra Mpamorona iza no mendrika ny hirehareha momba ny!
Isaac • Aogositra 22, 2013 amin'ny 10:04 aho • navalin'i
Dia talanjona aho amin'ny fomba mifandray ny adim-Taloha sy Vaovao testatment mba hanampy antsika hahatakatra ny loza ateraky ny braging amin'ny tenantsika!! Ity va ilay Fitaomam-panahy ho lalana farany “Lafo amin'ny Andriamanitro”???
Tiako ny mozika Což ny tena manan-danja!! hotahian'andriamanitra anie ianao!! Tohizo ny asa tsara!!
Jay • Aogositra 22, 2013 amin'ny 8:31 PM • navalin'i
Tsarovy ny tsy manan-kialofana ny Kristianina efa nolazaiko anareo ry zalahy momba ny? Mila fanampiana izy ireo.. Izay mety ho fanampiana ho lehibe ry zalahy. Andriamanitra no hahita fa i Jesosy na dia tsy afaka manao asa izay tsy nisy finoana. Ny olona rehetra tao LA dia mivily ny lamosiny noho ny tsy ampy finoana. Ndeha manohana ny fanjakana sy hanome izay azontsika atao. Izy ireo ihany koa ny manao mozika sy ny Fanahy tena miresaka ny tononkira. Ndeha niely fa koa! Manao izany isika ho amin'ny fanjakana y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Ndeha hanampy ny rahalahy. Tia anareo rehetra.
Jessica • Aogositra 26, 2013 amin'ny 9:36 PM • navalin'i
Blog mahatahotra misaotra Tompo noho ny niteny mafy ahy amin'ny alalan'ny Blog ity, Mila hanomboka braggin amin'ny Tompoko Hallelujaah! :-)
kaikitry • Aogositra 28, 2013 amin'ny 12:39 aho • navalin'i
Tena tia ny asa ataonareo. rehefa nitso-drano amin'ny lehibe noho ny asa fanompoana fomba
miresaka momba: Trip Lee • Naorina To mirehareha Pt. 2
miresaka momba: Trip Lee • mirehareha Wallpaper
Terence • Aprily 9, 2014 amin'ny 2:11 PM • navalin'i
mahery! Dia tapaka ianao izany an tsotra. Dia be ny fahendrena ho an'ny tovolahy iray. Mivavaka aho miaraka sy ho anao sy ny fianakavianao. Ny fanomezam-pahasoavana dia ho toerana ho anao. Ihany no manao izay Andriamanitra dia niantso anao hanao, manana ny solika, Ny Fanahy Masina. Fiadanana sy fanambinana ho anao ('i Silôma)!